သတင်းကမ္ဘာ အတင်းရှာ news | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သတင်းကမ္ဘာ အတင်းရှာ news
သတင်းကမ္ဘာ အတင်းရှာ news
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Nov 13, 2013 in Aha! Jokes, Satire |4comments
ပြည်ဒွင်းဖြစ် ဝိုင်အရက်အဖြစ် အဘဂျီးမြေး ဖိုးလဗျိ အရက်ချက်စက်ရုံမှ ကြေငြာမှတ်ပုံတင်ဒေါ့မည့် မိုးစက်ဝိုင် ဘရင်းန် အမှတ်တံဆိပ်အား တရုတ်ဖက်စပ်အရက်အဖြစ် မျိုးစောင့်အသူရာအဖွဲ့ဂျီးမှ ကန့်ကွက်ထားသည်။
နိုဝင်ဘာ၁၀ရက်နေ့ သစ်ထူးလွင်ဆိုက်တွင် ပါလာသောသတင်းကြောင့် မြန်တျန့်ဂေဇက်ရွာတွင်း မှောင်ရိပ်ထဲ လက်သီးပုန်းပြ မဟုတ်တရုတ် ဝါဒဖြန့်ချီနေသူ သုံးမည်ရ တရုတ်ကူမြူနစ်ကေဒါ ကြေးမုံဂျီး (ခ) အီတွန့်ဗွမ် (ခ) မှုံဂျီး အားဖော်ထုတ်နိုင်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ (သတင်း မပြည့်မစုံ။ ဒိုင်နာယာဉ်သည် နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်ည ၈နာရီဝန်းကျင်ခန့် သာကေတ ရုပ်ရှင်ရုံဘက်သို့ ဇင်ကမာလမ်းအတိုင်း မောင်းနှင်လာစဉ် ယာဉ်ရှေ့ လမ်းလယ်ပိတ်ကာ စက်ဘီးနင်းလာသော အသက်၂၆ နှစ်အရွယ် ကိုမှုန်ကြီး (ခ)ကျော်သက်ခိုင်က လမ်းဖယ်မပေးသောကြောင့် ယာဉ်မောင်းနှင့် စကားများခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနောက် ဒိုင်နာ ယာဉ်မောင်းက ခရီးသည်များကို မ.ထ.သ ၄၉(အဝါ) ဒိုင်နာယာဉ် ဂိတ်ဆုံး မှတ်တိုင် ဖြစ်သော ရုပ်ရှင်ရုံ မှတ်တိုင်တွင် ချပေးပြီး ၄င်း၏ အိမ်သို့ ယာဉ်ကိုမောင်းနှင်လာခဲ့ကြောင်း၊ အမှတ် (၁) ထူပါရုံရပ်ကွက်၊ ၁၃ လမ်း အရောက်တွင် စကားများခဲ့သူ မှုန်ကြီးက အငှားယာဉ်တစ်စင်းဖြင့် လိုက်လာကာ မောင်းနှင်နေသော ဒိုင်နာယာဉ် ဘေးမှ တွယ်တက်ပြီး အရှည်နှစ်ပေခန့်ရှိ ဓားရှည်ဖြင့် ယာဉ်မောင်း၏ ညာဘက် မျက်နှာပြင်ကို ခုတ်ခဲ့ရာ ပြတ်ရှဒဏ်ရာရ ရှိခဲ့ကြောင်း)
ဝံဂျီးအရေအတွက် များပြားလွန်းဂျောင်း လွှတ်တော်အတွင်း ဝေဖန်မှုအား သမဒရုံး ဝံဂျီးအမှတ်(၆၃) ဗိုလ်ချုပ် ဦးထုံမှ ဖြေရှင်းရာတွင် မိမိဒို့တဖွဲ့တည်းသာ မဟုတ်ဖဲ အခြားသူများလည်း လူများဇွာသုံး လည်ပတ်နေဂျောင်း ကမ္ဘာကြော် မြန်တျန့်ဂေဇက် သဒင်းစာ ရုံးအဖွဲ့စာရင်း ကိုးကား၍ ဖြေဆိုသွားသည်။
ရုံးဖွင့်ပွဲ ဓာတ်လိုက်၍ လက်ပြတ်သွားသော အဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်တဦးအား ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ ပြန်လည်ကုသပေးမှုဖြင့် လက်နှစ်ဖက်စလုံး ပြန်ကောင်းလာပြီးနောက် တရုတ်ကူမြူနစ်အစိုးရမှလည်း သမဒဂျီးသားမက် ကကြောင်ကြီး လျှာနှစ်ဆ ရှည်စေရန် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ပေးမည်ဟု ကြေငြာသည်။ ခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်ပါက မြန်တျန့်ဂေဇက်ရွာထဲ ယခင်က လက်လှမ်းမမှီ ပုန်းအောင်းနေသော သာမီး အငုံး အဖူး အလန်းလေးများအား လျှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင် တော့မည်ဟု သိရသည်။
ဗူလဲကွ ငါ့သာမီးဂို ချောင်းနေဒါ.. တေတွားမယ် ဟွန်း..
ကြောင်လဲအရင်ဇုံး လျှာအဖြတ်ခံလိုက်လေ… အာ့မှ လျှာနှစ်ဆရှည်အောင်ခွဲစိတ်လို့ရမာ…
အွန်း …. ဒီဝိုင်က လစ်မစ်တက် အယ်ဒီးရှင်း တလုံးထဲသော ၀ိုင် ဆိုတော့ကာ ..
Ve Ve အချိုရည်လေးဘဲ ပြောင်းသောက်တော့မယ်ကွယ်
အိုက်ဒါ ဥကြောင် သာမီးလားငင်င် ..
တောင်း စား ပလိုက်မယ် …